Fran Marin | | Famolavolana tranonkala, General
Mba hamoronana pejin-tranonkala iray izay tsy dia ilaintsika loatra, dia bebe kokoa amin'ny famoahana lahatsoratra tsotra toy ny notepad izay efa azontsika atao ny manamboatra ny kaody sy ny taolan'ny pejinay. Na izany aza, misy ny rindranasa izay manamora kokoa ity asa ity ho anay ary mamonjy fotoana betsaka amin'ny safidy fanampiny marobe, na fanampiana ara-nofo izany amin'ny labels ampiasainay, ny fahafaha-miditra amin'ny topi-maso ny zavatra noforoninay na karazana kojakoja rehetra.
Anio dia hizara aminao ny safidin'ireo Mpanonta kaody 6 maimaim-poana ary azoko antoka fa maro aminareo no hahita azy ireo toy ny fonon-tànana hiasa amin'ny tetikasan-tranonkalanao.
1 Tonian-dahatsoratry ny CoffeCup
5 Aptana Studio
6 kahie ++
Tonian-dahatsoratry ny CoffeCup
Izy io dia fampiharana multiplatform (azo alaina ho an'ny Windows sy Mac system) maimaimpoana ary mandrakotra filàna maro be, anisan'izany ny fanampiana ara-nofo atolotray amin'ny fanoratana ny kaody na ny fidirana amin'ny topi-maso. Ny valiny rehefa manoratra azy izahay . Izy io koa dia manolotra maody premium misy tombony sy kojakoja fanampiny.
Tahaka ny fantatry ny Text Wrangler amin'ny tontolo Mac, dia ekena koa izy io ary afaka ihany koa. Manolotra safidy sy fitaovana maro isan-karazany amin'ny fanaovana rindrambaiko maimaimpoana izy io. Miatrika asa tsotra dia mety hahasoa be tokoa.
Maimaimpoana tanteraka io safidy io ary mifanaraka amin'ny rafitra fiasa rehetra koa. Ao anatin'ireo tanjany no ahitantsika ny fidirana amin'ny topi-maso ny pejinay rehefa manoratra ny kaody izahay, rafitra tsara amin'ny interface miaraka amina tabilao maromaro ary ny fanontana CSS manokana.
Ankoatry ny fahalalahana, dia endrika marobe ihany koa izy io ary manana tanjaka marobe handraisana azy. Ny tena mampiavaka azy dia misy ny fanohanan'ny mpizaha isan-karazany, ny fanampiana ara-nofo rehefa manoratra ny kaody sy ny mifanentana aminy amin'ny fiteny samihafa. Anisan'izany php na Python.
Ity rindranasa ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny rafitra fiasa Windows ary na dia efa manolotra safidy maro aza izy io dia afaka manampy plugins hampitombo ny fiasan'izy io. Tena mahasoa izany ara-maso satria mandrafitra ny fampahalalana rehetra amin'ny fomba be sary ary manana ny fampiasa rehetra izay ananan'ny Aptana Studio. Mety ho safidy tena tsara io, indrindra raha mila miasa amin'ny fanontana kaody haingana isika.
Anton Petrov dia hoy izy:
Maimaimpoana ihany koa ny Visual Studio Code, ary milamina kokoa sy mandroso kokoa noho ny ankamaroan'ny hafa rehetra, manasongadina ny fanohanana ny ASP.NET. Ary miampy hatrany ny fanohanan'ny Microsoft.
Valiny tamin'i Anton Petrov
Google dia namoaka ny kinova 2.1 an'ny loharano misokatra Material Design